Caalamka, 01 October 2016
Sabti 1 October 2016
Syria: Russia oo Xabad Joojin 48 Saac ah Dooneysa
Russia ayaa maanta sheegtay inay taageereyso xabad joojin 48 saac ah oo ka dhaqan gasha magaalada ku taaalla waqooyiga Syria ee Xalab, balse aysan dooneyn xabad joojin intaas ka dheer oo Mareykanka uu soo jeediyey.
Israel: Shimon Peres oo Geeriyooday
Ra’iisul wasaarihii hore ee Israel Shimon Peres oo adeegiisa dadweyne uu ka dheeraa jiritaanka Israel ayaa geeriyooday isaga oo 93 jir ah.
WHO: Dunida Waxaa Halis ku Haya Hawo Wasaqeysan
In ka badan 90 boqolkiiba dadka dunida ayaa waxaa saameeya hawo wasaqeysan, taasi oo hoggaamisa dhibaatooyin caafimaad oo tira badan, sida lagu sheegay warbixin cusub oo kasoo baxday ururka caafimaadka adduunka ee WHO.
Xuutiyiinta oo 'Xabad Joojin Diyaar u Ah'
Qof Is-qarxiyey oo 7 Qof ku Dilay Ciraaq
Masuuliyiinta dalka Ciraaq ayaa sheegay in qof ku jeeni-qaarnaa walxaha qarxa uu isku qarxiyey magaalada Baqdaad isaga oo goobtaas ku dilay toddoba qof halka uu dhaawacay illaa 19 qof.
Jordan: Qoraa Maxkamad lagu Hor Toogtay
Nin hubaysan ayaa maxkamad horteed ku toogtay Qoraa si weyn looga yaqaan dalka Urdun, halkaas oo qoraagani uu maxkamadda ku waajahayey dacwado la xidhiidha sawir-gacmeed uu soo dhigay bartiisa Facebook taas cadho ku abuuraysay bulshada muslinka ah.
Madxafka Taariikhda iyo Dhaqanka Dadka Madow ee Mareykanka oo La Furay.
Madxafka Taariikhda iyo Dhaqanka Bulshada Madowga Mareykanka ayaa shalay si rasmi ah loogu furay dadweynaha xaflad lagu qabtay Xarunta National Mall ee uu madxafku ku yaalo ee magaaladan Washington.
Duqayn ka Socota magaalada Xalab ee Syria
Duqeyn aan kala go’o laheyn oo ka dhan ah qaybta uu mucaaradka haysto ee magaalada Xalab ee dalka Syria ayaa sii socota maanta oo Sabti ah iyadoo dhismayaal badan dhulka lala simay.
Booliska Mareykanka oo Wareejiyey Meydka Daahir Axmed Aadan
Booliska Gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka ayaa xalay ku wareejiyey qoyska dhalay Daahir Axmed Aadan oo ah wiil Soomaali/Mareykan ah oo toorreey ku weeraray dad ka dukaameysaneyey suuqa magaalada St Cloud ee gobolka Minnesota.
Wararki u Danbeeyey ee Shirka Golaha Guud ee QM
Magaalada New-York ee dalka Mareykanka waxaa ka socda shirkii guud ee QM oo ay ka qeybgalayaan madax ka kala socota caalamka.
Mareykanka oo Dhalashooyin khaldan la bixiyey
Dowlada Mareykanka ayaa si khaldan u siisey dhalashada dad Magangalyo doon ahaa oo ka badan Sideed Boqol oo Qof
Obama oo Khudbad u Jeediyey QM
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa sheegay in dunida ay tahay inay garowsato in isku furnaanshaha caalamka ee dadka isku keenay uu sidoo kale soo saaray dal daloolo badan.